Wararka Maanta: Sabti, Mar 7 , 2020-Xildhibbaan Cabdiqaadir Jirde "Ma Dhimanin Himiladii Shanta Soomaaliyeed"
Xildhibbaan Cabdiqaadir Jirde oo ka mid ah Mudaneyaasha Aqalka Golaha Wakiilada Somaliland, ayaa soo bandhigay inuu jiro rabitaanka dawladda Itoobiya ee ku aadan xeebaha Somaliland, waxaana uu iftiimiyey in arrintaasi ay tahay himilo soo jireen ah oo ay wakhtiyo badan iska soo dhaxlayeen dawladihii kala dambeeyey ee wadanka Itoobiya.
Xildhibbaan Jirde, ayaa hadalkan sheegay mar uu ka hadlaayey Golaha Wakiilada Somaliland, waxaana uu carabka ku dhuftay in sida himilada Soomaali weyn aanay u dhiman oo kale in aanay u dhimanin himilooyinka waaweyn ee dawladda Itoobiya ay ka lee dahay Geeska Afrika, isaga oo xusay in himiladdii Shanta Soomaaliyeed rejo laga qabo in maruun ay isku iman doonaan oo ay midoobi doonaan balse hadda ay xidheen duruufaha wakhtigan jira.
“Dawladda Itoobiya waa dawlad aynnu deris nahay, waana dawlad hindiseyaal gaboobay(soo-jireen) ka leh mandaqadda, himilooyinka caynkaas ahina ma dhintaan oo kolba dawladda timaada ayaa wadciga la socodsiisa dadka oo siday wax uga badalayso se wax dhinta maaha. Arrinta ah in Itoobiya doonayso xeebaheena wax qarsoon maaha. Inaga ba himilooyinkeenu may dhiman oo Soomaali-weyn inagamay dhimanin, shanti Soomaaliyeed inagamay dhimanin ee wadcigan uun baa xidhay, waxaana aanu filaynaa maalin ka mid ah in shanti oo xor ah ay isa soo doontaan oo waa wax aan dhimanin, himilooyinka caynkaas ahina ma dhintaan”. Ayuu yidhi Xildhibbaan Jirde